Qaar kale - iPhone News | Wararka IPhone
In kasta oo suuqyada taleefannada casriga ah iyo kiniiniyada ay u muuqdaan wax u eg Microsoft oo leh Windows Phone, Apple oo leh iOS, Google oo leh Android iyo Blackberry oo leh Blacberry 10, kuwo kale ayaa iyaguna soo socda nidaamyada hawlgalka mobilada ee raba inay ku tijaabiyaan khamaaris khatar badan sida hawlgalkeeda gaarka ah ee daruuraha, xulashooyinka habayn cusub ama habab loogu talagalay adeegsadayaasha horumarsan ee doonaya inay sida ugu fiican uga helaan qalabkooda. Soo ogow waa kuwee nidaamyadan hawlgal ee mobilada ee leh isticmaaleyaal aad iyo aad u tiro badan.
Shaki la'aan adduunka kaaliyeyaashu way is badalayaan wax badan tan iyo markii ugu horeysay ee aan ku aragnay Siri taleefanka iPhone ...
Samsung waxay dooneysay inay sanadkan sharad gasho waxayna ku dhiiratay inay soo bandhigto qalab, sida dad badani qabaan, calaamadeyn doona ...
Koogeek waa mid ka mid ah noocyada ugu caansan qaybta wax soo saarka guryaha casriga ah. Waxaan la kulanay…
Kama tagayaan midkood inay galaan mid kale runtiina shirkadda Mark Zuckerberg ayaa runtii calaamadeysan ...
by Nacho Aragonese samee 4 sano .
Fitbit ayaa hadda soo bandhigtay jijin 3 Charge, oo ka mid ah tartamayaasha tooska ah ee Apple Watch, oo aan ka rajeyneyno a
Asturnaantu waa shay ku sii dhowaanaya inuu yahay utopia, qayb weynna waa sababteeda ...
Amazon waxay noqotay soo saaraha ugu weyn markay noqoto dadka ku hadla caqliga. Your Amazon Echo waa ...
Nest waxaa iska lahaa Google in mudo ah. Si kastaba ha noqotee, sidaad u aragtay, waa laba shirkadood oo ka shaqeeya ...
Appe wuxuu qorsheynayaa inuu ka dhiso seddex warshadood oo waaweyn dalka Mareykanka
Shirkadda ump Apple waxay qorsheyneysaa inay ka dhisto dalka Mareykanka saddex warshadood oo "waaweyn, weyn, weyn". La taliyaha ...
Spotify ayaa wajahaysa laba dacwadood oo cusub oo loogu talagalay ku xadgudubka xuquuqda lahaanshaha
Spotify ayaa hadda lagu weeraray dhowr dacwadood oo lagu eedeynayo adeegga qulqulka ee ku xadgudubka xuquuqda ...